WhatsApp ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်တစ်ဆင့်ချင်းစီ - Mobile Forum | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် | | social networking, WhatsApp ကို
အ ဗီဒီယိုကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အလွန်လူကြိုက်များလာပြီး၊ ဒီ function ကိုလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်ပါတယ် WhatsApp ကို, အသုံးပြုသူများသည်စျေးကွက်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးစာတိုပေးပို့စနစ်၏ဤအင်္ဂါရပ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အလုပ်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန် WhatsApp ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ web application ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာမှတိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုပေးသော၎င်း၏“ application” ဗားရှင်းကိုစတင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ WhatsApp ဝက်ဘ်မှဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုသင်မည်သို့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သည်ကိုသင်ပြပေးမည်။
1 WhatsApp ကို Web ကိုအသုံးပြုရန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ
1.1 ဘရောင်ဇာမှ WhatsApp ကို Web
1.2 Application မှ WhatsApp ဝက်ဘ်
2 WhatsApp ကို Web ပြproblemsနာများ
2.1 WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုကွန်ပျူတာနှစ်လုံးတွင်တစ်ချိန်တည်းအသုံးပြုပါ
2.2 WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုဖုန်းမသုံးပဲသုံးပါ
3 WhatsApp ဝက်ဘ်ဖြင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နည်း
4 ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် WhatsApp အတွက်အခြားနည်းလမ်းများ
4.1 Skype ကို
4.2 Hangouts ကို
4.4 Facebook က Messenger ကို
WhatsApp ကို Web ကိုအသုံးပြုရန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသမည့်အရာမှာ WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်မတူညီသောနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ လူအများစုထင်မြင်ယူဆကြသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်ခုထက်ပိုသောအရာများရှိသည်။ ပေါ်ပေါက်လာသောအမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာများကိုကြည့်ကြစို့။
ဘရောင်ဇာမှ WhatsApp ကို Web
၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်၊ browser မှ WhatsApp ဝက်ဘ်အသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်မည်သည့်လိုက်ဖက်သော browser မှမဆို WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုအသုံးပြုရန် အောက်ပါလိပ်စာကိုရိုက်ထည့်နှင့် "web.whatsapp.com" ရှာဖွေပါ။
ထိုသို့ WhatsApp ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ကျွန်ုပ်တို့သွားလိမ့်မည် ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို screen ပေါ်မှာ QR code ပြလိမ့်မယ်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် QR ကိုစကင်ဖတ်ပြီး WhatsApp ဝက်ဘ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် WhatsApp လျှောက်လွှာကိုသွားမည်။
WhatsApp ကိုသာကြှနျုပျတို့ရိုက်ပါ၊ "Setting" နှင့်ငါတို့ option ကိုရွေးချယ်ပါ « WhatsApp ဝက်ဘ် / Desktop »။ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်ကင်မရာကိုဖွင့်ပြီး၎င်းသည်အလိုအလျောက်ဆက်သွယ်လိမ့်မည်။
WhatsApp ကို SD ကဒ်သို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမည်သို့ရွှေ့ရမည်နည်း
Application မှ WhatsApp ဝက်ဘ်
WhatsApp တွင် Windows နှင့် macOS နှင့်လိုက်ဖက်သော application များရှိသည် WhatsApp ဝက်ဘ်ကို desktop application တွင်အသုံးပြုရန်၎င်းသည်အသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် browser ကိုမှားယွင်းစွာပိတ်လေ့ရှိသည်။
WhatsApp ဝက်ဘ်အပလီကေးရှင်းကို macOS နှင့် Windows တွင်အောက်ပါလင့်ခ်တွင်ကူးယူနိုင်သည်။
WhatsApp ဝက်ဘ်ကို download လုပ်ပါ Windows အတွက် LINK
WhatsApp ဝက်ဘ်ကို download လုပ်ပါ macOS အတွက်: LINK
ဝင်းဒိုးအတွက်လင့်ခ်တွင်၎င်းကိုကူးယူရန်သင်အခွင့်အရေးရှိသည် 32-bit နှင့် 64-bit နှစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ သင့်စက်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ။ ယခုဆက်သွယ်မှုသည်ယခင်ကဲ့သို့တူညီသောညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရန်လွယ်ကူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ပြီးလျှင် application ကိုဖွင့်သည် ၎င်းသည်ယခင်က browser ဗားရှင်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အား QR ကုဒ်ကိုပြလိမ့်မည်။ Application ကိုကိုယ်တိုင် WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုအသုံးပြုရန် QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်ရွေးချယ်စရာသို့ပြန်သွားပြီး၎င်းသည်အလိုအလျောက်ဆက်သွယ်လိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင်အခုငါတို့ပြသပါလိမ့်မယ် တိုက်ရိုက်အသိပေးချက်များ ethe ကွန်ပျူတာ ပြီးတော့ဒါကအားသာချက်တစ်ခုပါ။
WhatsApp ကို Web ပြproblemsနာများ
WhatsApp ဝက်ဘ်၏အသုံးအများဆုံးပြproblemsနာများအကြောင်းသင်ယခုပြောတော့မည်။ သို့မှသာ၎င်းကိုသင်သုံးသောအခါသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်၎င်း၏ကန့်သတ်ချက်များကိုသတိရစေမည်။
အသုံးပြုခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝဖယ်ရှားရမည် WhatsApp ကို Web နှစ်ခုမှာတစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာသုံးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်းမှမက်ဆေ့ခ်ျများကိုသာပေးပို့သည့်တစ်ချိန်တည်းတွင် WhatsApp ဝက်ဘ်တွင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်မည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် WhatsApp သည်“ cloud” တွင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် အခြား WhatsApp ဝက်ဘ်ဆက်သွယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသည်ကိုစနစ်ကတွေ့ရှိသောအခါ၎င်းသည်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသော session ကိုအလိုလျောက်ပိတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးသတင်းစကားပေးပို့သည်။
အကယ်၍ သင်သည် multiplatform နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်း system ကိုအသုံးပြုလိုပါက Facebook Messenger သို့မဟုတ် Telegram ကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်စရာများကိုရွေးချယ်ရမည်။
Android မှာဘယ်လို application နှစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ
နောက်တကြိမ်ငါတို့သည်ဤပုဒ်မခွဲလုပ်ပါ။ WhatsApp ဝက်ဘ်၌ကျွန်ုပ်တို့၏စာများမှသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သည့်ဆာဗာတွင်မသိမ်းဆည်းပါ။ နှင့်ဤတစ်မဟုတ်ဘဲရှုံးသောအခါအချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းသည်ဆာဗာတစ်ခုအနေဖြင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းကိုပိတ်ပစ်ခြင်း (သို့) ဒေတာနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမှမပြတ်တောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဘက်ထရီအတော်အတန်သုံးစွဲစေသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ဖုန်းကိုပိတ်ထားသည့်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဒေတာဆက်သွယ်မှုမပါပဲ WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်ုပ်တို့တားမြစ်ထားသည်။
သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထည့်သွင်းရန်အချိန်ရောက်လာပြီ WhatsApp မှတဆင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ပါ။ ထိုသို့အတော်လေးရှုပ်ထွေးသည်။
ယခင်က“ WhatsApp ဝက်ဘ်ပြproblemsနာများ” ဟုဖော်ပြခဲ့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကန့်သတ်ချက်များစွာရှိသည်၊ ပထမမှာကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ဖြစ်သည် WhatsApp ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုရမည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကပွင့်လင်းတယ် WhatsApp ကိုက်ဘ် ငါတို့သည်သင်ယခင်ကသင်ပေးခဲ့ကြသကဲ့သို့ငါတို့စက်ပစ္စည်းတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ။
စကားပြောဆိုမှုအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးသည်နှင့်ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ“ ကလစ်” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
link link တစ်ခုပါသော video ကင်မရာပေါ်လာသည့်နောက်ဆုံး option ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခန်းတခန်းကိုဖန်တီးရန် Messenger ကိုသွားပါဟူသောအသိပေးချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရလိမ့်မည်။
ဒီလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် လူ ၅၀ အထိဗီဒီယိုအခန်းတစ်ခန်းကို Messenger ပလက်ဖောင်းဖြင့်ဖန်တီးပါ Faceobook ကပိုင်ဆိုင်သည်။ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ WhatsApp ရှိသူမည်သူမဆိုထိုအခန်းထဲဝင်နိုင်သည်။
ဒီဟာက WhatsApp ဝက်ဘ်မှတစ်ဆင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် WhatsApp တည်ထောင်ထားသည့်ပုံသေနည်းဖြစ်သည် လွယ်ကူစွာ။
ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် WhatsApp အတွက်အခြားနည်းလမ်းများ
လူကြိုက်များသောဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကို application များစွာတွင်တွေ့နိုင်ပြီး၊ အချို့အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောမည်။
ရိုးရာရွေးချယ်မှု, လူတိုင်းနီးပါးသိတဲ့ application တစ်ခု ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဒီကိစ္စမှာရှေ့ဆောင်လုပ်ခဲ့လို့ပဲ။ ၎င်းသည်ဗီဒီယို ၁၀ ခုနှင့်အသံ ၂၅ ခုအထိခွင့်ပြုသည်။ သင်၎င်းကိုကူးယူနိုင်သည် ဒီမှာ.
ဒါကဂူဂဲလ်ရဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်တယ်။ ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုနှင့်။ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသောလူပေါင်း ၁၀ ယောက်အထိဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့် Multiplformform စနစ်ကိုခွင့်ပြုသည်။ သင်မှတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည် ဒီမှာ.
မကြာသေးမီအချိန်ကလူကြိုက်အများဆုံး, အသုံးပြုသူ ၁၀၀ အထိကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းသည်အလွန်ပျော်စရာအရေခွံနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများလည်းရှိသည်။ လျှောက်လွှာကိုသင် download လုပ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးထောက်ခံချက် (ထိုထက်ဆိုးသည်မဟုတ်) ဖြစ်ပါသည် အခြားကြီးကျယ်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခု၊ ကျွန်တော်တို့ Facebook အကြောင်းပြောကြသည်။ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်သိတဲ့လူတိုင်းနီးပါးမှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိလိမ့်မည်။ သင်ဘာထပ်မေး ဦး မလဲ။ သင်၎င်းကိုကူးယူနိုင်သည် ဒီမှာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » social networking » WhatsApp ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နည်းတစ်ဆင့်ချင်းစီ
Windows 10 မှာဖိုင်တွေဘယ်လိုရှာမလဲ
PC နှင့် Android အတွက်အကောင်းဆုံး PS2 emulators